Shil Dhaawacyo Sababay Oo Ka Dhacay Xerada Tababarka Xulka Germany
HomeGermanyShil Dhaawacyo Sababay Oo Ka Dhacay Xerada Tababarka Xulka Germany
Tiraba saddex qof ayay dhaawacyo kala duwani ka soo gaadheen shil ka dhacay, xayaysiis Telefishan oo lagu samaynayay xarunta ama xerada tababarka ee xulka qaranka wadanka Germany , maalintii shallay.
Dhacdadan ayaa timid kadib markii dirawalka tartamada baabuurta Mercedes ee shirkada DTM, Mr Pascal Wehrlein,uu jiidhay laba xubnood oo dadkii daawadayaasha ahaa ee madasha ku sugnaa kamid ah.
Ciidmada nabad galyada ee Police-ka ayaa xaalada labada qof ku tilmaamay in dhaawacoodu aanu sidaas halis u ahayn , isla markaana dhakhtarka la dhigay oo lagu dawaynayo.
Wararka ay warbaahintu hellayso ayaa sheegaya in difaacyahanka kooxda Schalke iyo xulka Germany ee Benedikt Howedes uu baabuurka shilka geystay gudihiisa ku sugnaa markii falku dhacayay , laakiin uu ka soo degay baabuurka isagoo aan wax dhaawac ah qabin.
Warsaxaafadeed ay soo saartay shirkada samaysa baabuurta Mercedes, oo ah cida maalgalinta ugu badan siisa xulka qaranka Germalka ayaa u qornaa sidan: “Intii aanu ku gudo jirnay booqashadii aanu ku tagnay xerada tababarka xulka Germany , waxaa dhacay shil baabuur oo wadaha DTM ee Pascal Wehrle uu ku dhaawacay laba qof oo jidkii uu ordayay baabuurku aad ugu soo dhawaaday.
“Ma sheegi karno faahfaahin inta uu leeg yahay dhaawaca labada qof , laakiin labadoodaba waxa loo qaaday dhinaca cusbitaalka oo ay dhakhaatiirtu ku dabiibayaan. Pascal Wehrlein sidoo kale wuu dhaawacmay.
“Waanu qoomamaynaynaa shilkaasi, dadka ku dhaawacmayna waxaanu u rajaynaynaa caafimaad san.
“Dabcan, waanu ka caawin doonaa dawladda baadhista sababtii shilka keentay.”
Arsenal Oo Sii Xajisatay Kaalinta 4-aad Kabahana La Dulmartay Hull City
20/04/2014 Khadar Dirir
Modric: Madrid wey dhayalsanaysay Liverpool Waxaanay Isha Kale Ku Eegaysay Ciyaarta Clasico-da